Hub ka dhigista oo ku wajahan Baay & Bakool – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasaarada Amniga Qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay laga bilaabay howlgallo hub-ka-dhigis ah.
Baydhabo noqonaysaa magaaladii labaad oo xukuumadda Soomaaliya ay ololaha hub-ka-dhigista ah ka billowdo, iyadoo arrintaasi maalmihii tegay ka socotay Muqdisho.
Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasada Baydhabo, C/qaadir Sheekh Cali ayaa sheegay inuu billowday howlgalka looga qaadayo shacabka hubka sharci-darrada ah, isagoo uga digay dadka ku nool magaaladaas inay si sharci-darro ah ku haystaan hub.
Sidoo kale, wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga Qaranka Somalia, Ibraahim Isaaq Yarow oo ku sugan Baydhabo ayaa ku baaqay in la xoojiyo ammaanka degmadaas, isagoo ciidamada dowladdana faray inay billaabaan howlgallada lagu ururinayo hubka sharci-darrada ah.
Xaafadaha Baydhabo ayaa lagu arkayaa ciidammo badan oo howlgallo kawada, inkastoo aan illaa hadda lasoo sheegin hub ay ciidamada amnigu ku qabteen howlgalladooda.
Shir aan caadi aheyn oo ay shalay Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada uuna ka qeybgalay madaxweyne Xasan ayaa lagu soo dhaweeyey howlaha hubka ka dhigista ee ka socda Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka dhawaajisay inay beegsanayso bakhaaro iyo garaashyo hubka lagu keydiyo oo ku yaalla Muqdisho, xilli howlgallo hub ka dhigis ah ay ka wadaan Muqdisho ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka, ahna wasiirka arrimaha Diinta iyo Awqaafta, Ridwaan Xirsi Maxamed oo warbaahinta kula hadlayay Muqdisho ayaa sheegay in qorshayaaasha hubka lagu dhisayo lasii ballaarin doono, ayna beegsan doonaan ciidamadu bartilmaameedyo lagu qariyo hubka.
“Ma jirto cid si gaar ah loogu duulayo; waxaa beegsanaynaa meelaha hubka lagu kaydiyo, sida bakhaarada, garaashyo waa hubka wax lagu gumaado weeyaan,” ayuu yiri Ridwaan Xirsi.
Bilowgii bishaan aya Golaha Wasiirada Soomaaliya meel mariyeen sharci lagu xakameynayo hubka, waxaan wixii xilligaas ka dambeeyey Muqdisho lagu weeraray dhowr siyaasi oo hubeysan.